Dlala iDemo - emabhayisikili ukuthi ihlanganise izinga zobuchwepheshe kanye dynamism
Namhlanje brand ngempela liyabonakala dlala. Amabhayisikili ngendlela emangalisayo engasindi, okuhlala, unayo i-ukubukeka akunakuqhathaniswa. Ngamunye imoto yale nkampani edume limelela izinga okusezingeni eliphezulu, lula, induduzo kanye nokuqina. Ngenxa yemizamo Team ibhayisikili jikisa imoto emangalisayo, elikwaziyo okubhekana nanoma isiphi izithiyo kanye nenhlabathi.
Inkampani dlala: amabhayisikili. umakhi
Izwe lapho kwakukhona brand - Italy, noma Russia? Lo mbuzo ayinakho impendulo ecacile ngenxa kunalokho elikhiqizayo Ngohlelo Ochwepheshe lamazwe amabili. Nokho, uma lokumba umlando, kuvela yokuthi elingenakuphikwa - izimpande yenkampani Italy. It yasungulwa eminyakeni 5 edlule. Umenzi inika isiqinisekiso izinga, ukuphepha nokusebenza.
Brand minyaka yonke eba izikhandle kakhudlwana ekufuneni, ngcono ukusebenza sibonga zabo emsebenzini ehlelekile iqembu abaklami nabaqambi abahlala e-Italy futhi eRussia.
Kuye kwenziwa okuningi ukuze zibe nokuncintisana.
Ukusetshenziswa aluminiyamu kwenza amabhayisikili okuhlala, engasindi, futhi ephelele.
Inqubo udini womshini amapayipi ozimele. Lona umsebenzi eziyinkimbinkimbi, okuyinto kamuva inikeza kalula, amandla nokuqina kwayo isidumbu. I Ochwepheshe okusungulile dlala - emabhayisikili, okuyinto ngempela angaphansi hydroforming, bese ucindezela ekubumbeni. Lezi zinqubo kuyenziwa ngesikhathi esifanayo ukuze uqinise uzimele, okwandisa rigidity kanye nokwehlisa isisindo imoto.
Three-ntathu design Uhlaka uhlelo amashubhu.
Ukusetshenziswa tapered eziveza izakhiwo sibonga ngalo, futhi inikeza lula ngenkathi ushayela. Lezi amabombo zivumelane ngokuphelele ukubhekana ngokuphumelelayo ukusetshenziswa elikhulu nelisindayo.
Umenzi Iyakwazi ukukhiqizwa izimoto ezimbili ezinamasondo ngezinhloso ezehlukene:
Urban ezihlukahlukene dlala - emabhayisikili zenzelwe ugibele wezokuHlaliswa kwaBantu. Basuke izimpawu kwagcizelela isondo usebe design, Uhlaka engasindi, imfoloko, uqede vibration amaphiko esikhulu, kanye ukubopha emangalisayo. Izimoto ezivamile zaloluhlobo zinzima imodeli SKY futhi Kite.
Umugqa unqamule izwe kuyinto imoto yakhelwe ushayela ngesimo sendawo enezintaba, ngomumo ukuze banqobe noma iziphi izithiyo kanye izithiyo futhi ifakwe imishini izinga ezifana nezinamathiselo. Izimoto Izindaba ezikulolu chungechunge ziye ephezulu disc amabhuleki nge hlobo mechanical noma wokubacindezela. ezokuthutha ezimbili ezinamasondo kuyinto bokuthi umkhiqizo dlala. Amabhayisikili, izithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko ukubonisa ukwethembeka nokusebenza. Basuke ifakwe Uhlaka 17 noma namasondo angu 19 intshi 26 27.5 noma 29 amasentimitha.
Isifundo umzila emabhayisikili ziziphilela ukubukeka omkhulu futhi igxile Ukushushuluza kakhulu. Naphezu ubuhlakani okubonakalayo uzimele, imoto ine kwanginika amandla amakhulu. Lokhu ekuphambukeni ibhayisikili ifakwe inkambo 140 mm kanye isihlalo adjustable. Isibonelo esimangalisayo lolu hlobo ibhayisikili amamodeli isinyathelo Spy UKWEHLELA.
izimoto zabesifazane anemisila luhlaka ukukhanya nge indawo yokwakheka ipayipi. Ibhayisikili ifakwe phambi ukushaqeka mfutho, ikhwalithi ukuwudlulisa usebe lwesistimu ukubopha.
umugqa Wezingane izimoto yalesi brand kuhloswe abalandeli ezisencane yokuphila asebenzayo futhi inguqulo-miniature emabhayisikili omdala. Ethandwa kakhulu kukhona UMIKI futhi Kiti amamodeli ngokwanele libeke sha dlala iDemo.
Hamba ukusonga uhlobo kwenye amamodeli we compactness yayo, okuyinto ebaluleke ezimweni enyinyekile noma izinto zokuhamba. Njengomthetho, lolu hlobo izenzo njengoba ibhayisikili entabeni.
Izibuyekezo kwamakhasimende. Kochwepheshe main kanye nebubi
Zithandwa liyabonakala emhlabeni kuyinto dlala brand. Amabhayisikili, okuyinto libuyekeza iningi akhayo, libanakekele kanye nenhlonipho enkulu. Izinzuzo izimoto ukuthi inkampani idinga ukufaka ukubukeka zinkulu, okumangalisayo unyathela amabhuleki uhlelo, okuvumela inokukhanya okusheshayo ukubhekana nanoma yisiphi izimo ezingalindelekile endleleni futhi abushelelezi eshintshashintshayo.
Kungakhathaliseki indlela ibhayisikili akaphelelwa ukubukeka kwaso, ayikho izingxenye Awekho creaks noma okuxekethile. Ohlangothini plus ke idingekile ukuze icwecwe, okuyinto ngokuphindiwe ukutakula enkosi yayo ukuvumela ukuthutha libhayisikili, ngisho izithuthi zomphakathi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngesikhathi ukusebenza ibhayisekili zikhona izici ezimbi ngokuqinisekile kudingeka ucabangele ngaphambi kokuthenga. Lezi zihlanganisa ezisindayo up, ukushesha kancane futhi yekhwalithi ephansi impahla eselishova ukuthi zilimele ngempela kalula.
Abaqeqeshi Top neminye isisu izinhlangothi
Indlela Yokukhetha Pneumatics
Bench ngoba ebhentshini Igumbi cindezela ekhaya: kanjani ukukhetha
Motorboat "Sarepta": incazelo, izici
Air ngezibhamu okuzingela ngaphandle kwelayisensi. Inamandla emoyeni ngezibhamu okuzingela
Stels Navigator 850: izici ibhayisikili
I Bhalobhasha kangcono ku PC ngo-2013
Mikrobleyding ishiya - kuyini?
Indlela yokusebenzisa indlebe amathonsi izingane?
SOFAS Wezingane njengoba imingcele - ukhululekile ingalali ingane
IQembu LamaNazi (NSDAP): abaholi hlelo, izimpawu, umlando
"Ukusebenziseka" - kuba ... Testing "ukusebenziseka"
Wamafutha Sinaflana - izincomo Isicelo
Ntambo "Semenovskaya": ububanzi, amakhosi wangempela ukunitha
Kanjani ukuze ahlanze kahle kwesibindi
Kuncono ukuhlela yokugezela: indlela ukwandisa kube nesikhala esingasetshenziselwa okuthile?
Simple ikhekhe nokudayisa ukudla okungabizi. ikhekhe okumnandi ngaphandle baking: kadokotela
Hairdryers Coifin: incazelo, izithombe